मौद्रिक नीतिमा के छन् व्यवसायीका अपेक्षा ? - Arthapage
मौद्रिक नीतिमा के छन् व्यवसायीका अपेक्षा ?
प्रकाशित मितिः २९ असार २०७७, सोमबार १६:४८ July 13, 2020
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र यसको संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण प्रभावित भएका सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यवसायीसम्मले मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याजदरको किस्ता तिर्ने समयसीमा वृद्धिदेखि ब्याजदरमा सहुलियतसम्मको अपेक्षा बजारले गरिरहेको छ ।
कोरोनाले प्रभावित भएका उद्योगी–व्यवसायीहरूले त उद्योग पुनरुत्थानका लागि सस्तो ब्याजदरको सहुलियत कर्जाका साथै कालोसूची र धितो लिलामीको व्यवस्थामा समेत सहुलियतको आग्रह गर्दै केन्द्रीय बैंकमा सुझावसमेत बुझाइसकेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बचाउँदै सरकारदेखि उद्योगी, व्यवसायी र आमसर्वसाधारणको स्वार्थ मिल्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई छ । सरकारले ल्याएको बजेटबाट खासै उत्साहित हुन नसकेका व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिमा बढी नै अपेक्षा गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सुनचाँदी, हस्तकलाका साथै घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट राखेको अपेक्षाका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार स्
अहिले बजारमा सुनको भाउ महँगो हुँदा बिक्री ठप्प छ । बरु लकडाउनपछि सर्वसाधारणले घरघरमा खर्च व्यवस्थापनका लागि सुन बिक्री गर्ने प्रचलन भने बढिरहेको छ । ग्राहकले बिक्री गर्ने सुन खरिद गर्नका लागि व्यवसायीहरूलाई पैसाको खाँचो छ । हामीलाई तरलताको अभाव छ । त्यसका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध होस् भनेर अपेक्षा गरेका छन् ।
जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स लिएर वित्तीय कारोबार गर्छन्, सुनचाँदी व्यवसायीहरूले पनि परम्परागत रूपमा नै घर–घरमा नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी चल सम्पत्तिका रूपमा सुनको काम गर्दै आइरहेकाले यसबाट व्यवसायीहरूलाई मात्र नभई आमउपभोक्ताहरूलाई पनि लाभ पुग्छ ।
अहिले पनि सरकारले सुनलाई विलासी र अनुत्पादक वस्तुका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले कुनै पनि वस्तुबाट रोजगारी सिर्जना, राजस्व आर्जन र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने त्यसलाई विलासी वा अनुत्पादक क्षेत्र भन्न मिल्दैन ।
सुनलाई सेफमा थन्क्याएर राख्दा मात्र अनुत्पादन हो । नेपालमा सुन जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म जोडिएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुनको कारोबारबाट ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म योगदान पुगेको छ । हाम्रै छिमेकी देश भारत र चीनमा १५ प्रतिशतसम्म जीडीपीमा योगदान पु(याएको छ । नेपालमा पनि जीडीपीमा योगदान २० प्रतिशतसम्म पुयाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र सोअनुसारको नीति–नियम र आपूर्ति व्यवस्थापन हुनु आवश्यक हुन्छ । यसबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्छ ।
कोभिड–१९ को महामारी र संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।
यसअघि पनि भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता समस्या भोग्यौं, तर अहिले कोरोनाको महामारीको प्रभाव धेरै छ । सरकारले यतिबेला उद्योग सञ्चालन गर भने पनि हामी विभिन्न समस्यामा जुधिरहेकाले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं । यतिबेला हामीसँग उद्योग सञ्चालनका लागि कच्चापदार्थ, बैंकलाई बुझाउने ब्याज किस्ता तथा कामदार छैनन् । सरकारले कामदारलाई ५० प्रतिशत तलब भुक्तानी गर भने पनि मजदुरहरूले मानिरहेका छैनन्, राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदर २ प्रतिशत घटाउने भने पनि केही निजी बैंकले अझै घटाएका छैनन् । यो अवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योगीहरूले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।
यसैगरी अब उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण आवश्यक छ । हामीले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेसम्म पुनर्कर्जा पनि साना तथा घरेलु उद्योगहरूले पाएका छैनन् । हाम्रो प्रयासले पहिलो पटक पुनर्कर्जाको कार्यविधिमा समेटेको छ ।
ब्याजदरलाई घटाउनुपर्छ । लघु तथा साना उद्योगहरूसँग धितोको व्यवस्था नहुँदा बैंकबाट ऋण पाएका छैनन् । हामीसँग करोडौं मूल्यबराबरको मेसिनरी हुन्छ, तर त्यसलाई बैंकले धितोका रूपमा स्वीकार गर्दैन । त्यसैले अब साना तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थिर पुँजीलाई धितो मानेर लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तै कोभिड प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
कोरोना महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त भएका बेला सबै क्षेत्रलाई असर पारिरहेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न उद्योग–व्यवसाय प्रभावित भएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा हस्तकला उद्योगको क्षेत्र बढी नै प्रभावित भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।
हस्तकला व्यवसायको बजार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय हो । आन्तरिक बजारमा एकदमै न्यून मात्रामा हाम्रा उत्पादनहरू खपत हुन्छन् । कोरोनाका कारण हामीले हस्तकलाका सामान निर्यात गर्दै आएका अधिकांश देशहरू प्रभावित भएकाले यो व्यवसाय वर्षैभर प्रभावित हुने अनुमान गरेका छौं । अहिले पनि केही व्यवसायीहरूले सामान निर्यात त गरिरहेका छन्, तर त्यो अत्यन्तै न्यून छ ।
कोरोनाको महामारीले गर्दा हस्तकलाका सामानका लागि नयाँ बजार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अबको केही समय विदेश निर्यातभन्दा पनि स्वदेशी बजारलाई नै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, स्वदेशी वस्तुको खपत गर्ने सरकारको नीति नै छैन । हुन त सरकारले १५ प्रतिशत महँगो भए पनि नेपाली सामान नै प्रयोग गर्ने भनेको छ ।
त्यो कुरा व्यवहारमा लागू भएको छैन । तपाईं अहिले पनि मन्त्रालय वा सरकारी निकायमा पुग्नुभयो भने टेबल, कुर्सी, सोफा, दराजका साथै सजावटका सामग्री, कार्पेट, पर्दासमेत चाइनिज वा विदेशी देख्नुहुन्छ । कोभिड, मेटल क्राफ्ट, ज्वेलरीजस्ता सामानहरू बाहिरबाट आएका कारण हाम्रा उद्योगका उत्पादन प्रभावित भएका छन् । अल्लोबाट बनेका सामानहरू नै धेरै छन् । पहिला उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूबाट नेपाली सामानको प्रयोग गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मितिः २९ असार २०७७, सोमबार १६:४८ |
Prevके हो मौद्रिक नीति ?
Nextनेपालगन्जमै बन्ने भयो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला, फुलटेक्राको जग्गामा सहमति